အနုပညာအလုပ်တွေကြိုးစားပြီး မိခင်ဖြစ်သူအတွက် စိန်နားကပ်တစ်ရံ ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ခင်ရတနာစိုး - TGI Daily News
ပရိသတ်ကြီးရေ .. The Voice Myanmar ပြိုင်ပွဲ ကနေတဆင့် ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိခဲ့တဲ့ ခင်ရတနာစိုးကတော့ အခုဆိုရင် အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ ကိုဗစ်ကာလကြီးမှာ Show တွေမဆိုနိုင်သေးပေမယ့်လည်း Live Sale လေးတွေရောင်းချပြီးရတဲ့အနုပညာကြေးနဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကို ပြန်လည်ကျေးဇူးဆပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။
ဟိုး ငယ်ငယ်လေးကထဲက မိခင်ဖြစ်သူ ကိုသီချင်းဆိုရင်းပိုက်ဆံရှာပြီး ကန်တော့ခဲ့ပေမယ့် အခုချိန်ထိအဖတ်တင်တာရယ်လို့ မဝယ်ပေးဖူးသေးတဲ့အတွက် ဇန်နဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့ညက သူမ Live saleလုပ်ရင်းနဲ့ လုပ်အားခလေးစုပြီး မေမေပူဆာနေတဲ့ ခရမ်းဆွဲစိန်နားကပ်ကိုဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ သမီးအတွက်ဒီအချိန်မှာလိုအပ်တာက ကိုယ်ပိုင်သီချင်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကားလေးပါ ဒါပေမယ့် အမေ့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ယှဉ်ရင်တော့ဒါတွေကအရေးမပါပါဘူး ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သူမလိုအပ်နေတာထက် မိခင်ဖြစ်သူလိုချင်နေတာလေးကို ဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
ခင်ခင်က သူမအမေကို အရမ်းချစ်သလို သူမ အတွက်အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေဖို့အမြဲဆုတောင်းပေးနေပါ ၊ ပွစိပွစိလဲလျော့ပေးပါလို့လည်း ချစ်စဖွယ်တောင်းဆိုထားပါသေးတယ် ။ အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့မိဘအပေါ် သိတတ်လိမ္မာတဲ့သမီးလေး ခင်ခင်အတွက် ပရိသတ်တွေကလည်း ချီးကျူးလေးစားကြောင်း မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ် ။
ပရိသတျကွီးရေ .. The Voice Myanmar ပွိုငျပှဲ ကနတေဆငျ့ ပရိသတျအားပေးမှုအခိုငျအမာရရှိခဲ့တဲ့ ခငျရတနာစိုးကတော့ အခုဆိုရငျ အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါမှာ လြှောကျလှမျးနခေဲ့ပွီဖွဈပါတယျ ။ လတျတလောမှာတော့ ကိုဗဈကာလကွီးမှာ Show တှမေဆိုနိုငျသေးပမေယျ့လညျး Live Sale လေးတှရေောငျးခပြွီးရတဲ့အနုပညာကွေးနဲ့ မိခငျဖွဈသူကို ပွနျလညျကြေးဇူးဆပျနိုငျခဲ့ပွီဖွဈကွောငျး ပရိသတျတှကေို မြှဝပေေးလာခဲ့ပါတယျ ။